Uru 4 nke Micro-Influencers | Martech Zone
Fraịdee, June 1, 2018 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Dika ahia ndi mmadu na-etolite ma na-agbanwe, ndi oru amara ugbu a karie mgbe obula banyere uru nke ikwuputa ozi n'etiti ndi mmadu ndi mmadu elebara anya anya. Anyị ekekọrịtawo a tụnyere nke (macro / mega) influencers megide micro-influencers mbụ:
(Macro / Mega) Mmetụta - ndị a bụ ndị mmadụ dịka ndị ama ama. Ha nwere otutu ndi na - esote ma nwee ike ichota ihe, mana o ghaghi na ulo oru, ahia, ma obu oru.
Micro-influencer - ndị a bụ ndị mmadụ nwere ike ịnwe ezigbo ndị na-eso ụzọ, mana ha na-arụsi ọrụ ike ma nwee nnukwu mmetụta na ndị na-eso ụzọ ha nwere. Otu ihe atụ nwere ike ịbụ ezigbo ọkachamara ire ere ụlọ nke ọtụtụ ndị na-eso ya na-eso.
Micro-mmetụta na-enye nchikota zuru oke nke idi nso, ntụkwasị obi, njikọ aka, na ego na-adịghị ka ihe na-eme na macro-influencers na ndị a ma ama, ọdịnaya ha mepụtara na-emetụta ndị na-ege ha ntị n'ihi na ha nwere ike ịkọwa.
Ihe omuma ahu, nke onye ahia anyi mebere, ikpo okwu mgbasa ozi SocialPubli.com, gosipụtara uru anọ dị mkpa nke ịrụ ọrụ na ihe a na-akpọ 'ogologo-ọdụ' nke ahịa influencer:
Micro-Influencers nwere ntụkwasị obi karịa - ha maara nke ọma ma nwee oke mmụọ banyere niche akọwapụtara nke ha kpuchie, n'ihi nke a, a na-ahụta ha dị ka ndị ọkachamara na isi mmalite nke ozi.
Micro-Influencers nwere oke aka - ọdịnaya ndị micro-influencers na-eme na-emetụta ndị na-ege ha ntị n'ihi na ha nwere ike ịkọwa. Ọmụmụ ihe na-egosi na ka ndị na-eso ụzọ na-abawanye, ọnụọgụ njikọ na-ebelata
Micro-Influencers nwere ezigbo eziokwu - n'ihi na ha nwere ezi mmasị na niche ha, micro-influencers na-emepụta ọdịnaya nke ahaziri nke ọma ma bụrụ eziokwu.
Micro-Influencers dịkwuo ọnụ - micro-influencers dị ọnụ ala karịa ndị ama ama ma ọ bụ mega-inflence na ọtụtụ nde ụmụazụ.
Nke a bụ nkọwa zuru ezu:
Tags: ahịa ahịaNdị na-emerụ ahụnnukwu-influencermega-mmetụtamega-influencermicro-influencersocialpublisocialpubli.com